OTU ESI JIKỌỌ DISKI IKE SITE NA KỌMPUTA NA LAPTỌỌPỤ (NETBOOK) - DISK - 2019
Otu esi jikọọ diski ike site na kọmputa na laptọọpụ (netbook)
Ezi ụbọchị niile.
Ọ bụ ọrụ dị mkpa: nyefee pịakọta dị ukwuu na diski ike nke kọmpụta na diski ike nke laptọọpụ (nke ọma, ma ọ bụ n'ozuzu ya, hapụrụ disk ochie ahụ na PC ma enwere ọchịchọ iji ya na-echekwa faịlụ dị iche iche, ya mere, na laptọọpụ HDD, dịka iwu, enweghị ike) .
N'ọnọdụ ọ bụla, ịkwesịrị ijikọ draịvụ ike na laptọọpụ. Isiokwu a bụ naanị maka nke a, tụlee otu n'ime nhọrọ ndị kachasị mfe ma dị mfe.
Ajụjụ nke ajụjụ 1: otu esi wepu kpoo mbanye site na kọmputa (IDE na SATA)
Ọ bụ ihe ezi uche dị na ya tupu ị jikọọ ụgbọala ahụ na ngwaọrụ ọzọ, a ghaghị iwepụ ya na sistemụ PC (Eziokwu ahụ bụ na dabere na njikọ njikọ nke ụgbọala gị (IDE ma ọ bụ SATA), igbe ndị a ga-achọ ijikọ ga-adị iche. Banyere nke a mgbe e mesịrị na isiokwu ... ).
Fig. 1. Hard Drive 2.0 TB, WD Green.
Ya mere, ka ị ghara iche ụdị ụdị disk ị nwere, ọ kacha mma ka ị wepụ ya na sistemụ ahụ ma lelee anya ya.
Dị ka usoro, ọ dịghị nsogbu na nnukwu mmịpụta:
Mbụ, gbanyụọ kọmputa ahụ kpamkpam, gụnyere wepụ plọg site na netwọk;
meghee akụkụ mkpuchi nke usoro njikọ ahụ;
wepupu ugbo niile nke ejikọrọ ya na diski ike;
ichoputa ihe ngbachapu ma wepu diski (dika ochichi, o na-aga n'osisi).
Usoro n'onwe ya dị mfe na ngwa ngwa. Jiri nlezianya lelee njikọ njikọ (lee fig 2). Ugbu a, ọtụtụ ihe eji eme ihe n'oge a jikọtara ya na SATA (ntanetị nke oge a na-enye nnukwu nnyefe data). Ọ bụrụ na ị nwere akpa disk, ọ ga-ekwe omume na ọ ga-enwe interface IDE.
Fig. 2. SATA na IDE ihu na draịva siri ike (HDD).
Ihe ọzọ dị mkpa ...
Na kọmputa, a na-etinyekarị disks "nnukwu" (3.5) nke anụ ọhịa "buru ibu" (lee fig. 2.1), ebe ọ bụ na laptọọpụ, a na-etinye ihe dịka sentimita 2 cm (1 inch bụ 2.54 cm). A na-eji ọnụ ọgụgụ 2.5 na 3.5 eme ihe iji gosipụta ihe mmepụta na ọ na-ekwu maka obosara nke akpa HDD na sentimita asatọ.
Ogologo oge niile nke ọgbara ọhụrụ 3.5 dị arọ 25 mm; a na-akpọ nke a "ọkara elu" ma e jiri ya tụnyere ọtụtụ diski okenye. Ndị na-emepụta nke a ji elu a jide otu efere ise. Na 2.5 ihe siri ike na-eme ihe niile dị iche iche: 9.5 mm dị elu nke mbụ dị 12.5 mm, nke na-agụnye ihe ruru efere atọ (yana ugbu a, enwekwara diski ndị dị nro). Ogologo nke 9.5 mm aghọwo ihe ọkọlọtọ maka ọtụtụ laptọọpụ, mana ụlọ ọrụ ụfọdụ na-emepụta diski ike 12.5 mm nke dabeere na efere atọ.
Fig. 2.1. Ihe kpatara ya 2.5 anụ ọhịa mbanye - n'elu (laptọọpụ, netbooks); 3.5 sentimita - ala (PC).
Jikọọ ụgbọala na laptọọpụ
Anyị chere na anyị ejirila interface ...
Maka njikọ ozugbo ị ga-achọ otu BOX pụrụ iche (igbe, ma ọ bụ sụgharịa na Bekee. "Igbe"). Igbe ndị a nwere ike iche:
3.5 IDE -> USB 2.0 - pụtara na igbe a bụ maka diski 3.5-inch (na dịka dị na PC) nwere interface IDE, maka ijikọta na USB 2.0 ọdụ (mbufe ọsọ (ezigbo) abụghị karịa 20-35 Mb / s) );
3.5 IDE -> USB 3.0 - otu, naanị ọnụego mgbanwe ga-adị elu;
3.5 SATA -> USB 2.0 (n'otu aka ahụ, ihe dị iche na interface);
3.5 SATA -> USB 3.0 wdg.
Igbe a bụ igbe anọ, buru ibu karịa nha diski n'onwe ya. Igbe a na - emepe site n'azụ ma tinye HDD ozugbo n'ime ya (lee fig 3).
Fig. 3. Tinye diski ike n'ime BOX.
N'ezie, mgbe nke a gasịrị, ọ dị mkpa iji jikọọ ike (nkwụnye) na igbe a ma jikọọ ya site na eriri USB na laptọọpụ (maọbụ TV, dịka ọmụmaatụ, lee fig 4).
Ọ bụrụ na disk na igbe na-arụ ọrụ, mgbe ahụ na "kọmputa m"ị ga-enwe disk ọzọ nke ị nwere ike ịrụ ọrụ dị ka disk diski mgbe niile (usoro, mbipụta, ihichapụ, wdg.)
Fig. 4. Jikọọ igbe ahụ na laptọọpụ.
Ọ bụrụ na mberede, disk adịghị ahụ na kọmputa m ...
Na nke a, enwere ike ịchọrọ 2 nzọụkwụ.
1) Lelee ma enwere ndị ọkwọ ụgbọala maka igbe gị. Dị ka a na-achị, Windows na-akwalite onwe ya, mana ọ bụrụ na ịgba egwu abụghị ọkọlọtọ, mgbe ahụ enwere ike inwe nsogbu ...
Iji malite, malite njikwa ngwaọrụ ma hụ ma ọ bụrụ na ọkwọ ụgbọala dị na ngwaọrụ gị, enwere akara mgbaaka odo (dị ka mkpụrụ fig. 5). M na-atụ aro ka ị nyochaa kọmputa ahụ na otu n'ime ọrụ ndị dị na mwepụta ndị na-emelite onwe-ha:
Fig. 5. Nsogbu na onye ọkwọ ụgbọala ... (Iji mepee njikwa ngwaọrụ - gaa na nchịkwa Windows ma jiri ọchụchọ).
2) Gaa njikwa diski na Windows (Iji tinye ya, na Windows 10, pịa nri bọtịnụ na bọtịnụ START) ma chọpụta ma ọ bụrụ na e nwere HDD ejikọrọ n'ebe ahụ. Ọ bụrụ na ọ bụ, mgbe ahụ ọ ga-abụrịrị, ka ọ bụrụ ihe a na-ahụ anya - ọ dị mkpa ka ọ gbanwee akwụkwọ ozi ahụ na nhazi ya. Na nke a, site n'ụzọ, enwere m isiokwu dị iche: (M na-atụ aro ịgụ).
Fig. 6. Njikwa Diski. N'ebe a, ị nwere ike ịhụ ọbụna diski ndị ahụ anaghị ahụ anya na onye nyocha na "kọmputa m".
Enwere m ya niile. Site na ụzọ, ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịfefe ọtụtụ faịlụ site na PC na laptọọpụ (ma ịghị eme atụmatụ iji HDD si na PC gaa na laptọọpụ), ụzọ ọzọ nwere ike: jikọọ PC na kọmpụta na netwọk mpaghara, wee dezie faịlụ ndị dị mkpa. Maka ihe a nile, naanị otu waya ga-ezuru ... (ma ọ bụrụ na anyị eche na e nwere kaadị netwọk na laptọọpụ na kọmputa). Maka ama ndi ozo gbasara nke a n'isiokwu m na netwọk mpaghara.
Ezi okpu 🙂
Otu esi emepụta Windows Iji Gaa USB ụgbọala USB n'enweghị Windows 8 Enterprise
Gbanwee faịlụ XML na Ụdị Excel
Otu esi eme otu otu VKontakte
Enweghị ike ịwụnye mmemme na Windows - njehie ...
Ndozi nsogbu nsogbu na Windows 10
Dị ka ị maara, arụ ọrụ nke ịmepụta ihe oyiyi 3D ka a wuru n'ime Photoshop, mana ọ bụghị mgbe niile iji ya mee ihe, ọ dịkwa mkpa iji dozie ihe dị elu. Ihe nkuzi a ga-etinye aka na otu esi eme ederede atọ na Photoshop n'enweghị eji 3D. Ka anyị malite ịmepụta ederede volumetric. Mbụ ị chọrọ dee ederede a. GụKwuo
Software ịgba ụgwọ
Esi ele kọmputa anya vk na ibe edokọbara
https://termotools.com ig.termotools.com © Disk 2019